Fampidirana sy ny fampiharana ny milina fanapoahana baomba mpandoro hitifitra | Ding Tai
Fampidirana sy fampiharana ny milina fanapoahana roller pass shot
Ny milina fipoahana fitifirana dia karazana teknolojia fitsaboana hanapoahana fasika sy vy voatifitra eo amin'ny velaran'ny zavatra ara-pitaovana amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny alàlan'ny milina fipoahana. Raha ampitahaina amin'ny haitao fitsaboana hafa, dia haingana kokoa, mahomby kokoa, ary afaka miaro na manasa ny fizotran'ny fanaovana casting.
Ny orinasa amerikana dia nanao milina fitifirana voalohany nanaparitaka izao tontolo izao tamin'ny taona 1930. Nanomboka tamin'ny taona 1950 ny famokarana Shinoa fitaovana fanapoahana basy, indrindra ny fandikana ny teknolojia Sovietika teo aloha.
Ireo milina fipoahana mitifitra dia azo ampiasaina ihany koa hanesorana ireo burrs, mizana ary harafesina izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahatokisana, ny endrika ary ny famaritana ireo singa amin'ny zavatra. Ny milina fipoahana mitifitra ihany koa dia afaka manala ireo voaloto ao anaty faritra misy coated ary manome mombamomba ny tarehy iray izay mampitombo ny felatan'ny sarina mba hanamafisana ny sangan'asa.
Roller pass milina fipoahana baomba
Ny milina fipoahana mitifitra iray dia hafa noho ny milina fanoratana voatifitra izay ampiasaina mba hampihenana ny harerahana amin'ny ampahany mba hampitombo ny fihenjanan-javatra samihafa, hanamafisana ny tanjaky ny ampahany, na hisorohana ny hatezeram-bahoaka.
Fanadiovana ny tany
Ireo fitaovana fanapoahana tifitra dia nampiasaina voalohany tamin'ny indostrian'ny famoronana mba hanesorana ny fasika amin'ny tarehy sy ny hoditry ny oxide amin'ny vy vy sy ny vy vita amin'ny vy.
Saika ny vy vita amin'ny vy, ny vy matevina, ny vy vita amin'ny vy, ny vy vita amin'ny vy sy ny sisa dia tsy maintsy tifitifitra. Tsy vitan'ny fanesorana ny hoditry ny oxide sy ny fasika eny amin'ny mason-tsivana, fa koa ny dingana fanomanana tena ilaina alohan'ny fanaovana fitsirihana ny kalitao. Ohatra, alohan'ny fanaraha-maso tsy manimba ny gony amin'ny turbine lehibe, dia tsy maintsy atao ny fanapoahana fipoahana hentitra mba hahazoana antoka fa azo itokisana ny valin'ny fisafoana.
Amin'ny famokarana amin'ny ankapobeny fananganana, ny fanadiovana ny fipoahana baomba dia dingana iray tena ilaina mba hahitana ireo lesoka amin'ny tarehy toy ny pores subcutaneus, lavaka slag, fasika, insulation mangatsiaka, peeling ary ny sisa.
Ny fanadiovana ny fantsona vy tsy misy ferrous, toy ny allie aluminium sy ny varahina varahina, ankoatry ny fanesorana ny hoditry ny oxide sy ny fitadiavana ireo lesoka amin'ny fantsona, ny tanjona dia ny manapoaka tifitra mba hanaisotra ny fantsom-pandresena maty ary hahazoana ny kalitaon-tarehy miaraka amin'ny dikany misy haingo. , mba hahazoana vokatra feno. Ao amin'ny metalyurika vy sy ny famokarana vy, ny fipoahana mitifitra na pickling dia dingana mekanika na simika amin'ny fanesorana ny hoditry ny phosphore mba hahazoana antoka ny vokatra avo amin'ny famokarana vy.
Ao amin'ny famokarana ny vy vita amin'ny vy sela, ny vy vita amin'ny vy sy ny takelaka vy vita amin'ny vy sy ny tady, ny fanapoahana fipoahana na fikarakarana «picking» dia tsy maintsy tanterahina aorian'ny fikatsahana ny fizahana mangatsiaka sy ny hatevin'ny takelaka vita amin'ny vy mihintsana.
Araka ny teoria maoderina metaly maoderina, ny fampitomboana ny fanaparitahana dislocation ao anaty metaly no lalana voalohany hanatsarana ny herin'ny metaly.
Voaporofo fa teknika mitifitra dia fomba mahomby hampitomboana ny dislokika. Zava-dehibe izany ho an'ny ampahany metaly izay tsy azo hamafin'ny fiovan'ny fizarana (toy ny fanamafisana ny martensite) na mila fanamafisana bebe kokoa amin'ny fototry ny fiovana miovaova.
Ny fiaramanidina, indostrian aerospace, fiara, traktera ary ny faritra hafa dia mila kalitao maivana, fa ny fahazoana ny fahatokisana dia miakatra avo sy avo kokoa, ny fepetra ara-teknika lehibe dia ny fampiasana teknolojia fipoahana baomba hanatsarana ny tanjaka sy ny havizan'ny singa.
tifitra Peening Machine, Fanapoahana tsiro, Masinina fipoahana baomba, nitifitra fatratra Spare Parts, Kodiarana fanapoahana tifitra, H miendrika basy mitifitra, Ny vokatra rehetra